पाथिभरा माताले सबैको मनकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २८ गते बिहिबार – Etajakhabar
पाथिभरा माताले सबैको मनकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २८ गते बिहिबार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशी श्रीसूर्य उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल आषाढ २८ गते विहिवार नेपाल सम्बत ११३८ तछलागा,सन् २०१८ जुलाई १२ तारिक कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथि पूर्वान्ह ११ वजेर २१ मिनेटसम्म,आद्र्रा नक्षत्र राती १० वजेर ३७ मिनेटसम्म, ध्रुवयोग,शकुनीकरण,आनन्दादियोग काण,सूर्य मिथुन राशीमा,चन्द्रमा मिथुन राशीमा ।
ॐः–राहुकालः– अपरान्ह १÷५३ वजेबाट ३÷३६ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः– विहान५÷१७ वजेबाट ७ वजेसम्म रहनेछ,दूरमुहूर्तः–विहान ९÷५२वजेबाट १०÷४७ वजेसम्म र अपरान्ह ३÷२२वजेबाट ४÷१७वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷४२ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३७ वजेसम्म रहनेछ,गुली कालः–विहान८÷४३ वजेबाट १०÷२६ वजेसम्म रहनेछ, यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ७ वजेसम्म शुभ वेला,७ वजेदेखि ८÷४३ वजेसम्म रोगवेला,८÷४३ देखि १०÷२६ वजेसम्म उद्वेगवेला,१०÷२६ देखि १२÷९ वजेसम्म चरवेला,१२÷९ देखि १÷५२ वजेसम्म लाभ वेला,१÷५२ देखि ३÷३५ वजेसम्म अमृत वेला,३÷३५ देखि ५÷१८ वजेसम्म कालवेला र ५÷१८ वजे देखि सूर्यास्तसम्म शुभवेला रहनेछ । ॐः–सूर्यास्तबाट ८÷१८ वजेसम्म अमृत वेला,८÷१८ वजेदेखि ९÷३५ वजेसम्म चरवेला,९÷३५ देखि १०÷५२ वजेसम्म रोग वेला,१०÷५२ देखि १२÷९ वजेसम्म कालवेला,१२÷९ देखि१÷२६ वजेसम्म लाभ वेला,१÷२६ देखि २÷४३ वजेसम्म उद्वेग वेला,२÷४३ वजे देखि ४ वजेसम्म शुभ र ४ वजे देखि सूर्योदयसम्म अमृत वेला रहनेछ ।
सामान्यतया दिन अनुकुल देखिन्छ । कार्य क्षमता घट्ने छैन । गरेका काम अधिकाँश सफल हुने देखिन्छ । अरुको सहयोग कमै मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ ।
विना मेहनत कहि केहि हुने छैन । आर्थिक कारोवारमा चनाखो हुनु नै होला । भय आतुरमा कुनै काम नगर्नु होला । अरुबाट सहयोगको आसा धेरै नराख्नु होला । व्यापारबाट थोरै आम्दानी बढ्नेछ ।
दिन सामान्यतया अनुकुल नै देखिन्छ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । आफन्तका कारण धन क्षय हुने देखिन्छ । कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला । अरुका कुरालाई झट्ट विश्वास नगरिहाल्नु होला ।
खर्च व्यवस्थापन गर्न नसके आर्थिक समस्यामा परिनेछ । काम गरेर लाभ लिन सकिने छैन । अनावस्यक काम कुरामा समय खर्च हुनेछ । नदुखेको टाउको दुखाउने काम हुन सक्छ । विश्वास घात हुनेछ ।
देखिएका सम्भावनाहरु क्षिण भएर जाने छन् । कुनै काम गर्नु छ भने समयमा नै गर्नु होला । गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन ।
आज काम दाम र नाम प्राप्त हुनेछ । विगतमा गर्न नसकिएका काम आज हुने छन् । नसोचेका ठाँउबाट धन आउन सक्छ । काम गर्दा दुविधामा नपरि गर्नु होला ।
सुधारका संकेत देखिने छन् । कामले पनि गति लिनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ अवसरको खोजी हुनेछ । घरमा भन्दा घर बाहिर बसेर काम गर्दा सजिलो हुनेछ ।
समयले साथ दिएको देखिदैन । काम गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्ला । चोटपटकको भय देखिन्छ । जोखिम मोलेर काम नगर्नु होला । आर्थिक कारोवारमा विवाद पर्न सक्छ ।
आएको अवसर गुम्न सक्छ समयमा सतर्क रहनु होला । आज गरेका काम प्राय सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट पनि आँशिक लाभ हुनेछ । आर्थिक कारोवारमा टाउको दुखाई बढि हुनेछ ।
शत्रु माथि विजय प्राप्त हुनेछ । प्रतिश्पर्धात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ ।
इच्छाशक्ति बढि हुनेछ भने काम थोरै कुरा धेरै हुने छन् । व्यापारमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । परिवारजनमा मनमुटाव बढ्न सक्छ । आर्थिक कारोवारमा विवाद पर्न सक्छ ।
– समस्यको जालोबाट उम्केर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । घरका कुरामा मात्रै अल्झिनु भयो भने प्रगति हुने छैन । मिलेर काम नगर्नु होला । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफलता हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ २७, २०७५ समय: २२:४९:५३